Manatombo Andro Iray Ny Taona No Tsy Nahavitako Lahatsoratra Fetin’ny Lainga · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2016 9:16 GMT
Sary avy amin'i Dan Moyle (CC BY 2.0).
Tao anatin'ny taona maromaro izao ny mpamakin'ny Global Voices—azo iadian-kevitra angamba izany—no nitady ny lahatsoratry ny fetin'ny lainga isaky ny voalohany avrily, izay manome karazam-pihevahevana bebe kokoa eo anivon'ny gidragidra, fanoherana, fanagadrana, kolikoly, fanampenam-bava, kiantranoantrano an'orinasa sy ireo tantaran-doza sy voina isan-karazany mivoaka mandavataona tato amin'ny tranonkala nandritra ny 11 taona.
Tamin'ny voalohany Avrily 2016, anefa, dia mbola ireo tsanganana matotra efa teo ihany no misongadina teo amin'ny pejy fandraisan'ny Global Voices, ary nobedesin'ny Tale Mpanatanteraka Georgia Popplewell ankitsirano mihitsy ny mpandray anjara Allen Smithee.
Smithee, izay nanoratra ny [fetin'ny lainga] ato amin'ny Global Voices hatramin'ny taona 2009, niditra ho mpandray anjara tsotra tato amin'ny Global Voices tamin'ny 2008, saingy napetraka ho mpampihomehy vahoaka rehefa nanolotra tantara maromaro mety hiteraka fanafintohinana izay natsipin'ireo tonia amin'ny tany, araka ny nolazain'ny Tale Mpanatanteraka Ivan Sigal, “tsy misy amin'ireo tantara ireo mba milaza zavamisy na ny marina.”
Tamin'ny voalohany Avrily teo aloha ny lahatsoratr'i Smithee nilaza fa nandany taona maro ny Global Voices nitaterana vaovao avy amin'ny firenena tsy misy, fa nivadika ho orinasa maka tombony ilay fikambanana tsy natao haka tombony, ary voatery niafina i Popplewell taorian'ny kisangisangin'ny fetin'ny lainga volana avrily nampanantena hanome iPhones maimaimpoana naharomotra ny mpikambana.
“Tsy resy lahatra aho hoe fantatr'i Smithee fa tsy marina ny zavatra nosoratany,” hoy ny Tonia Mpanatanteraka Sahar Habib Ghazi rehefa nantsoina hihainoana ny heviny. “Fa na mihoatra na latsaka ny lahatsoratra miasa eo amin'ny toe-draharaha, dia mamoaka azy ireny izahay.”
Araka an'i Popplewell, izay manitsy ny Tetezana – The Bridge, zoro fanoratana lahatsoratra GV ôrizinaly, tamin'ny herinandro fahatelon'ny volana marsa i Smithee no nandefa imailaka tany aminy hameno ny anjara toerany tamin'ny tantara efatra, ka ny roa amin'ireo tena manendrikendrika loatra ary ny iray “tsy hay hazavaina ny firefarefany amin'ny tany”. Tamin'ny herinandro i Smithee nanolotra ny anjara toerany fahadimy, izay nolazain'i Popplewell fa ekeny. Tamin'ny faha-31 marsa anefa, nandefa imailaka i Smithee hoe nanafangaro andro izy “manatombo andro iray ny taona 2016.”
“Tsy misy dikany mihitsy izany,” hoy ny toniam-baovao Lauren Finch, izay efa tratran'ny nolazainy hoe “vintan-dratsy” amin'ny fanitsiana ny asan'i Smithee’ tany aloha tany. “Ny andro iray mihoatran'ny volana febroary no mety nahatonga azy handefa ny tantara iray andro mialoha. Saingy izany i Smithee ho anao.”
11 Oktobra 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
06 Septambra 2021Oseania